တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ ကတိကဝတ်များကို ဖြည့်ဆည်းသည့်အနေဖြင့် တံခါးဖွင့်ဝါဒပိုမိုကျင့်သုံးရန် ကတိပြု - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ ကတိကဝတ်များကို ဖြည့်ဆည်းသည့်အနေဖြင့် တံခါးဖွင့်ဝါဒပိုမိုကျင့်သုံးရန် ကတိပြု
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်အား ရှန်ဟိုင်းမြို့တွင် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်၌ ကျင်းပသော စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တရုတ် နိုင်ငံတကာသွင်းကုန်ပြပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၌ ဗီဒီယိုမှတစ်ဆင့် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသည်ကို တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တံခါးဖွင့်ဝါဒအပေါ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘောတူညီမှု အားနည်းနေသည့်ကြားမှ တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO) ထံ ထပ်တိုးကတိကဝတ်များအား အပြည့်အဝပေးအပ်ထားသည့်အနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ ဈေးကွက်အား ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ဖွင့်လှစ်ရန် နိုဝင်ဘာ ၄ ရက်က ကတိပြုလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
သမ္မတ ရှီက ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလွှမ်းခြုံမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရခြင်းကို မှတ်ချက်ပြုလျက် လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့တံခါးဖွင့်ဝါဒ အညွှန်းကိန်း ကျဆင်းလာသည့်အပေါ် စိုးရိမ်မိကြောင်း စတုတ္ထအကြိမ်မြောက် တရုတ် နိုင်ငံတကာသွင်းကုန်ပြပွဲ (CIIE) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမိန့်ခွန်း၌ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ခေတ်နှင့်အညီ ဖြစ်ပေါ်နေသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေးလွှမ်းခြုံမှုအပေါ်တွင် ရပ်တည်ရမှာဖြစ်ပြီး တစ်ဖက်သတ်ဝါဒနဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးဝါဒကို ပယ်ဖျက်သလို တံခါးဖွင့်ဝါဒ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ကျင့်သုံးရာမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ နိုင်ငံတွေကို ပံ့ပိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ အနာဂတ်ကို ဆောင်ကြဉ်းပေးဖို့ဆိုရင် ဒါဟာ အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်” ဟု ရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။
“တံခါးဖွင့်ဝါဒဟာ မျက်မှောက်ခေတ် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ရှီက ယခုနှစ် CIIE တွင် ပါဝင်ကြသော တာဝန်ရှိသူများ၊ စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအား ပြောကြားခဲ့သည်။
မှန်ကန်သော နိုင်ငံစုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်မှုအတွက် အဓိကလမ်းကြောင်းအဖြစ် နိုင်ငံစုံပါဝင်သော ကုန်သွယ်ရေးစနစ်ကို လိုက်နာသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ထောက်ပံ့မှုကွင်းဆက်များ တည်ငြိမ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ရှီက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဒီဂျစ်တယ်စီးပွားရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းခွဲများနှင့် နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကဲ့သို့သော ကိစ္စရပ်များတွင် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရာ၌ တက်ကြွ ပွင့်လင်းသော သဘောထားဖြင့် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ရှီက ဆိုသည်။
လူဦးရေ ၁.၄ ဘီလီယံနှင့် အလယ်အလတ်ဝင်ငွေရှိသူ သန်း ၄၀၀ ကျော်ရှိသော တရုတ်နိုင်ငံသည် ဖန်တီးမှုရှိသော သွင်းကုန် ကုန်သွယ်ရေးမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် ပိုးလမ်းမ e-commerce မြှင့်တင်ခြင်းအတွက် သရုပ်ပြဇုန်များ ပိုမိုဖွင့်လှစ်ခြင်း စသည့် ဆောင်ရွက်ချက်များမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အခြားသောနိုင်ငံများနှင့် ဈေးကွက်အခွင့်အလမ်းကို မျှဝေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှီက ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် အရည်အသွေးမြင့်မားသော တံခါးဖွင့်ဝါဒ အခိုင်အမာမြှင့်တင်ရန် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် ကန့်သတ်စာရင်းကို ထပ်မံလျှော့ချသွားမည်ဖြစ်ကာ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အခြားသောဝန်ဆောင်မှုများဖွင့်လှစ်ရေး တိုးချဲ့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတ ရှီက မိန့်ခွန်း၌ ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာကြီးရဲ့ ဘုံအကျိုးစီးပွားတွေကို အခိုင်အမာလိုက်နာသွားမှာပါ” ဟု ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်နှင့် အစားအစာနှင့် စွမ်းအင်ဖူလုံမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ကမ္ဘာ့တောင်ဘက်ခြမ်းနိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မူဘောင်အတွင်း အဖွဲ့ဝင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများအား အကူအညီများ ပိုမိုပံ့ပိုးရန် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများ၌ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ရန် ကတိပြုလျက် ရှီက ပြောခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်သည် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO) သို့ တရုတ်နိုင်ငံ ဝင်ရောက်မှု နှစ်ပေါင်း ၂၀ ပြည့်မြောက်သည့် အခါသမယလည်း ဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် နှစ်ခုအတွင်း တံခါးဖွင့်ဝါဒ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ ကျင့်သုံးရာတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများသည် ဇာတ်ခုံအသစ်ဆီသို့ ဆောင်ကြဉ်းလျက်ရှိပြီး ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအတွင်းသို့ သစ်လွင်သော တွန်းအားပေးမှု ဖြည့်တင်းပေးလျက်ရှိကြောင်း ရှီက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံက အဖွဲ့အတွင်း ဝင်ရောက်မှု ကတိကဝတ်များကို အပြည့်အဝပေးအပ်လျက်ရှိပါတယ်” ဟု ရှီက ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံက သွင်းကုန်အပေါ်စည်းကြပ်ကောက်ခံသောအခွန်နှုန်းထားကို ၁၅.၃ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၇.၄ ရာခိုင်နှုန်းအထိ၊ အဖွဲ့ဝင်ကတိပြုမှုရဲ့ ၉.၈ ရာခိုင်နှုန်းအောက် လျော့နည်းကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀ က တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာ့ကုန်စည်များကုန်သွယ်ရေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာ နံပါတ် ၆ မှ ၁ နေရာသို့ မြင့်တက်လာခဲ့သလို ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၌လည်း နံပါတ် ၁၁ နေရာမှ ဒုတိယနေရာသို့ ခုန်တက်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
WTO သို့ ဝင်ရောက်ခဲ့ချိန်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် တိုးတက်မှုသည် တရုတ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ ကြံ့ခိုင်သော ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် တရုတ်ပြည်သူများ၏ အလုပ်ကြိုးစားမှုနှင့် ဇွဲနပဲကြီးမားမှု၊ နိုင်ငံတကာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ခိုင်မာရေးနှင့် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အကျိုးရလဒ်များအတွက် လုပ်ဆောင်ရန် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖန်တီးမှုခြေလှမ်းများ၏ ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း ရှီက ပြောကြားခဲ့သည်။
“တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ကတော့ စံချိန်စံနှုန်းမြင့်မြင့်နဲ့ တံခါးဖွင့်ဝါဒကျင့်သုံးဖို့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခွင့်အလမ်းတွေ မျှဝေဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်း ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ပိုမိုပွင့်လင်းပြီး အားလုံးပါဝင်မှုရှိရှိ၊ မျှမျှတတနဲ့ အားလုံးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးရှိတဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးလွှမ်းခြုံမှုဆိုတဲ့ ကတိကဝတ်ကိုလည်း ပြောင်းလဲပစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး” ဟု ရှီက မိန့်ခွန်း၌ ထည့်သွင်းပြောခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး သွင်းကုန်အတွက်ရည်ရွယ်ထားသော နိုင်ငံအဆင့်ကုန်စည်ပြပွဲအဖြစ် CIIE ပြပွဲသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ကုန်သည်များအတွက် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ် CIIE သည် နိုင်ငံနှင့် ဒေသ ၁၂၇ ခုမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၃,၀၀၀ နီးပါးကို ဆွဲဆောင်ထားလျက်ရှိသည်။
“တရုတ်နိုင်ငံမှာ နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော် အတွေ့အကြုံရှိတဲ့ ဥရောပကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ ပြောရရင် တရုတ်နိုင်ငံဟာ WTO သို့ ဝင်ရောက်ချိန်ကစပြီး တံခါးဖွင့်ဝါဒ ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းဖို့နဲ့ စီးပွားရေးပတ်ဝန်းကျင် တိုးတက်ဖို့ စဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကို မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ အနာဂတ်ကို ကျွန်တော်တို့ အပြည့်အဝယုံကြည်မှုရှိပါတယ်” ဟု Greater China ရှိ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှု၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာနှင့် Swarovski Crystal Business ၏ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ Tony Wei က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-11-05 00:30:51|Editor: huaxia
BEIJING, Nov.4(Xinhua) — Amid the weakening of global consensus on opening up, President Xi Jinping made fresh pledges Thursday to open the Chinese market wider as the country has fully delivered on its accession commitments to World Trade Organization (WTO).
“Opening up is the hallmark of contemporary China,” Xi told officials, business leaders and entrepreneurs participating in this year’s CIIE.
As part of the country’s efforts to safeguard true multilateralism, Xi said China will uphold the position of the multilateral trading regime as the main channel for international rules-setting, and safeguard the stability of global industrial and supply chains.
“China will firmly uphold the common interests of the world,” he said, pledging to actively join in global efforts to tackle climate change and safeguard food and energy security, and provide more assistance to fellow developing countries within the framework of South-South cooperation.
The year of 2021 marks the 20th anniversary of China’s accession to the WTO. Over the last two decades, the country’s continuous efforts in widening opening-up have brought its development toanew stage and injected fresh impetus into the world economy, Xi noted.
“China has fully delivered on its accession commitments,” Xi said.
China’s overall tariff rate has been cut from 15.3 percent to 7.4 percent, lower than the 9.8 percent accession commitment, delivering dividends to its trade partners all over the world.
In the past 20 years, China’s global ranking of trade in goods has risen from the sixth to the first, while that of its trade in services has jumped from the 11th to the second.
The country’s development and progress since it entered the WTO is the result of much hard work and great tenacity of the Chinese people under the strong leadership of the Communist Party of China and the country’s proactive steps to strengthen international cooperation and work for win-win outcomes, Xi said.
“As for China, we will not change our resolve to open wider atahigh standard; we will not change our determination to share development opportunities with the rest of the world; and we will not change our commitment to an economic globalization that is more open, inclusive, balanced and beneficial for all,” Xi said.
As the world’s first import-themed national-level expo, China’s CIIE has offeredaplatform for entrepreneurs and traders worldwide. This year’s CIIE draws nearly 3,000 businesses from 127 countries and regions, higher than its last edition.
“AsaEuropean company in China for over 30 years, we have witnessed China’s continuous efforts to deepen opening up and improve the business environment since its accession to the WTO. We have full confidence in China’s development and future,” said Tony Wei, Managing Director of Business Services and Managing Director of Swarovski Crystal Business, Greater China. Enditem
Photo – 1,2 – Chinese President Xi Jinping deliversakeynote speech via video at the opening ceremony of the fourth China International Import Expo held in east China’s Shanghai on Nov. 4, 2021. (Xinhua/Li Xueren)